WBO’n Oromiyaa kutaalee hedduu torban kana dhuunfachuun beeksise – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooWBO’n Oromiyaa kutaalee hedduu torban kana dhuunfachuun beeksise
WBO’n Oromiyaa kutaalee hedduu torban kana dhuunfachuun beeksise
Keelloo Media: Hagayya 11,2021
Waraanni Bilisummaa Oromoo WBO’n lola qaamolee waraanaa mootummaa waliin Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun injifannoo galmeessaa jiraachuu beeksise.
Torban kana keessa kutaalee Oromiyaa Lixaa fi Kibbaa hedduu dhuunfachuu isaas gabaafamee jira.
Lola waraana mootummaa, raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa Oromiyaa waliin gaggeessaa jiraachuu kan ibsu WBO’n magaalaa Oromiyaa hedduu keessaa waraanee baasuu ibseera.
Gama mootummaan garuu waan waraana adeemaa jiruu kana wanti ifatti himame hin jiru. Ta’ullee WBO’n ammoo qaamolee waraanaa booji’aa jiraachuu suuraa fi Vidiyoon agarsiisaa jira.
Miidiyaa hawaasaa kana irratti danoomaan qoodamaa kan jiru osoo uummata mariisisuu, Kibba Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaa Bule Horaa gandoota hedduu keessatti mul’ateera. Hawwaasa waliin nageenya akka qabus viidiyoo waraabamee maxxanfameen WBO’n agarsiisaa jira.
Bakkoota qaamni mootummaa akka gumurukaatti dhimma itti bahataa ture waraanee cabsuu isaa sagalee Vidiyoon dhagaa’ameen WBO’n zoonii kibbaa agarsiiseera.
Haasaa sana keessattis saamichi uummata irra qaama mootummaan gahaa turuu dubbata miseensi WBO viidiyoon aragame. Gama isaaniin garuu saamichaaf dararaa uummataa irraa bilisa ta’uu ibsa.
Dhimma kana guutummaatti qaamni mootummaa gara godina Gujii waan dubbate hin qabu. Lolli akka jirus wanti eerame hin jiru.
Akkasuma Zoonii Lixaa guutummaa Wallaggaa keessa lolli waraana mootummaa fi WBO gidduutti adeemsifamaa jiraachuu uummatni fi WBO’n illee beeksisaa jira.
Lola kanaan magaalaalee Qellem Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa hedduu dhuunfataa akka jiru ibsa WBO’n.
Namooti ijaan argan gama barreeffamaan ergaa Keelloof erganiin baadiyyaaf aanaalee irraa qaamoleen mootummaa gara godinaatti baqataa akka jiranis eeru.
Dhimma kana ilaalchisuun garuu gama mootummaan ammoo ammas waan jedhame hin jiru.
WBO’n garuu Opireeshinii gurguddaa gaggeessaa jiraachuu ibsa. Har’a galgala kanas gama miidiyaa Arraya Biyyoolessaa Oromiyaa tiin dhimma lola tibbanaaf haala WBO kan ilaallatu hogganni WBO haasaa akka taasisu eeramaa jira.
Hogganaan olaanaa WBO akkasuma, hogganni WBO Zoonii lixaa kaleessa haala waraanaa ilaalchisuun dubbii taasisaniiru
Keelloo: Hagayya 11,2021
Hogganni olaanaa ABO/WBO akkasuma hogganni WBO zoonii lixaa karaa miidiyaa arrata biyyoolessa Oromiyaatiin kaleessa Hagayya 10,2021 haala lola adeemaa jiruu uummata Oromoof ibsaniiru.
“Lola ijibbaataa isa yeroo dhumaaf waanjoo garbummaa uummata keenya Oromoo irraa kaasuu gaggeessaa” jirra kan Jedhan hogganni WBO Marroo Dirribaan, waraana gaggeessaa jiran kanas kallattii gurguddaa sadiif bakka sadiin gaggeessaa akka jiran himan.
Opireeshiniin waraanaa kallattii sadiin gaggeeffamuu kan himan yoggaa ta’u, kan gama Lixa Oromiyaa Finfinnee hanga wallaggaa bobbaa Jaal Laggasaa Wagii jedhuun opireeshiniin adeemaa jira jedhan.
Akkasuma kan gama Kibba baha Oromiyaa, Baha Oromiyaa fi Kibba Oromiyaa ammoo bobbaan adeemaa jiru maqaa bobbaa Nadhii Gammadaa, fi Opiraashinii Elemoo Qilxuu kan jedhuun kan sadaffaa ammoo Finfinnee irraa hanga kaaba Oromiyaa Wallootti sakattaa taasifamaa jiru yoo ta’u kun ammoo bobbaa maqaa biraan adeemaa jiraachuu Jaal Marroon Arrata Biyyoolessaan himaniiru.
Duulli kunis maaliif akka akeekkatee ka’ee illee himaniiru. Akka ibsa isaaniitti duulli kun “garbummaatti xumura gochuu, qabsoo Oromoo bilisummaa gudunfuuf” kan akeekkate ta’uu himan.
Akkasuma duulli waraana Bilisummaa Oromoo WBO kun bakka sakattaa gaggeessu kanatti guutummaatti caasaa mootummaa akka dhabamsiisee aanaalee, magaalaalee fi baadiyyaa jiran tohatuuf fuula jalqabame ta’uu himaniiru.
“Duulli kun lafa dhuunfachuu. Uummata dhuunfachuu. Bulchiinsa uummataa diriirsaa adeemuu.” Ta’uu isaas ibsaniiru.
Duulli gaggeeffamu kun hangamiif tura gaaffii jedhuuf haasaa taasisaniin deebii kan kennan yoo ta’u “Bobbaan maqaa sadiin socho’aa jiru kuni yeroo gabaabaa qofaaf kan turudha” jedhan.
Sana boodawoo gaaffii jedhuufis deebii kan kennan wayiita ta’u “duullin kun erga dhumeen booda WBO’n maqaa tokkichaan ammas duula nii geggeessa. Duulli sun maqaa akkamiin adeemaaf akkamitti adeema? Kan jedhu yoggasuu ibsina” jedhan
Duulli kutaa waraanaa sadiin, opireeshinii gurguddaa sadiin eegale kun Dilbata darbe Hagayya 8,2021 irraa qabee gaggeeffamaa akka jiru hogganni kun eeraniiru.
“Waraanni Bilisummaa Oromoo arcaatuu diinaa dhabamsiisaa Oromiyaa bilisoomsuun dhuunfachaa tarkaanfachuu eegaleera” jedhaniirus.
Haala duula waraanaa WBO’n adeemaa jiruu kana hanga ammaa gama mootummaa Itoophiyaatiin waan ifatti himame hin qabu. Mootummaan waraanni gaggeeffamaa akka jirus eeree hin jiru.
Gama mootummaan haala lola adeemaa jiruu kana kan ibsamu yoo ta’e isin biraan gahuuf akka miidiyaa keenya Keellootti qophiidha!
WBO'n Oromiyaa hundatti injifannoo galmeessaa jira.
WBO'n Oromiyaa hundatti injifannoo galmeessaa jira. Yeroo WBO'n Uummata mariisisu Uummanni haala kanaan bahee dhaggeeffataa…
Lixa Oromiyaa Godina Qellem Wallaggaa Keessatti Tarkaanfii Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) Fudhate Sababeeffatuun Agaaziin…
Ethiopia: TDF loses control of Mersa town in Amahra region